Mazano ekugadzira nharaunda yakatenderedza eCommerce | ECommerce nhau
Jose Ignacio | | Marketing, evanhu vezvenhau
Kuvandudza nharaunda yakatenderedza eCommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana kunofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvakakosha zvakanyanya kune chero online muzvinabhizimusi. Nekuti inogona kuve iri yakanakisa chiteshi yekuwana akawanda vatengi uye semhedzisiro, kunatsiridza kutengesa kutengeswa. Chero zvazvingaitika, zano iri harifanire kuverengerwa semuma network. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kuteedzera kune hunhu hweako hwehunyanzvi chiitiko.
Kana iwe uchiziva maitirwo echirongwa ichi chezvekutengesa uine chokwadi chakazara kuti mune yepakati term iwe unozogona kuona optimization mune rako rezvekutengesa department. Zvishoma nezvishoma unozopa mukurumbira kune rako chairo raunomiririra. Nenzira yakapusa, inoshanda uye neimwe inonakidza. Mariri iyo isingakoshe chete huwandu hwevashandisi vanoumba nharaunda yakatenderedza eCommerce. Kana zvisiri, pamusoro pezvose, hunhu hwako uye padyo nezvinangwa zvawakazvigadzirira iwe mukusimudzira kwekutengeserana kwako kwemagetsi.
Mukati meichi chirevo chizere, isu tiri kuzokupa iwe mamwe mazano kuti iwe ugone kuaisa mukuita kubva ikozvino zvichienda mberi. Kubva munzira dziri nyore chaizvo dzinogona kugadziridzwa kune zvese zvinodiwa. Saka kuti kubva ikozvino zvichienda iwe uri muchinzvimbo chekusimudzira zvinotarisirwa zvebhizimusi rako kana sitoro yedhijitari, iri, mushure mezvose, chii chiri nezve ino nguva.
1 Tevedzera nharaunda yakatenderedza eCommerce: tsvaga zviwanikwa
2 Mazano mazhinji akakosha ekuzadzisa zvinangwa
3 Ndekupi kwaunogona kutanga nharaunda yevashandisi?
4 Nzira yekugadzira sei network yevanoshandisa kana vatengi?
Tevedzera nharaunda yakatenderedza eCommerce: tsvaga zviwanikwa
Imwe yemakiyi ekutanga kutsanangura chimiro chenhengo dzenharaunda yemushandisi. Saka kuti yakanangana nekugadzirisa izvo zvinodiwa zvemagetsi zvekutengeserana pachayo. Hazvishamisi kuti, chimwe chezvinangwa zvakakosha zveizvi zvinhu ndechekuti iwo maprofiles akagadziridzwa kune zvavanoda zvekutengesa. Nedzimwe dzakateedzana hunhu senge idzo dzatinofumura pazasi
Chengetedza hukama nezvinangwa zvakaisirwa nesangano.
Inoda kuisa pamwe nezvigadzirwa, masevhisi kana zvinhu zvinotengeswa.
Kuwiriranwa pakati pezvakanaka zvese uye kuti ivo vanokwanisa kusvika zvakajairika mapoinzi kubva kune yavo yega yekuona.
Kugona kwekuchengetedza hukama hwakanaka mukuda kwekuvimbika uye izvo zvinogona kubatsira mapato ese kubva ikozvino.
Kana vashandisi vakasangana nezvinodiwa izvi, hapana mubvunzo kuti vachange vari mumamiriro akakwana kuti vave munharaunda imwechete. Kubva kupi ruzivo runogona kuunganidzwa kugutsa zvido zvavo uye ndiko kuti, shure kwezvose, zvazviri kubva ikozvino.
Mazano mazhinji akakosha ekuzadzisa zvinangwa
Iwe unoziva here kuti kugadzira nharaunda yakatenderedza chigadzirwa, theme kana zvemagetsi commerce inogona kunge isiri yakaoma maitiro? Asi kuti zvive nenzira iyi, hauzove nesarudzo kunze kwekutsvaga kana kuona vanhu vanofarira nezano raunofunga kubva kubhizinesi rako repamhepo. Pamusoro pezvo, hunhu hwakajairwa hunofanirwa kutanga muzvikamu zvese zvechiitiko kuti usiyane nedzimwe nharaunda kana mamwe maforamu.
Kubva pane iyi nzira yekutanga zvakakosha kuti kubva ikozvino uedze kuburikidza nenzira dzakasiyana dzekutengesa idzo vateveri vako vanonzwa sechikamu cheshambadziro chitoro nechitoro, nokudaro uchigadzira inharaunda inobatanidzwa, yakagadzikana uye yakatendeka. Izvi zvinhu zvinogona kuwanikwa kuburikidza nezviito izvi:
Batanidza vashandisi kana vatengi vane zvemhando yepamusoro zvemukati zvinofarira kuitira kuti kuvimbika kune rimwe bato kusimudzirwe.
Iwe haufanire kunge uchiremerwa, asi pane zvinopesana iwe unofanirwa kuita nekunyengetedza uye nekushingaira kwakawanda kuyedza kuchengetedza vatengi.
Kurudzira zviito izvi nekuvapo mumamiririri emamiririri epasi rese emusika wepasi rose: Facebook, Twitter, Linkedin kana Instagram.
Muchitoro chepamhepo iyo mifananidzo ndiyo inonyanya kukosha yezvinyorwa kuti iwe unogona kupa. Nechikonzero ichi, haufanire kuregeredza zvinhu zvekuona, asi pane zvakapesana: pamper pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi kufunga.
Unofanira kuziva kwazvo kutaurirana mabhenefiti kuti iwe unogona kupa kune vatengi kana vashandisi. Kunyanya, kuratidza kukosha kwakawedzerwa kwavanogona kuwana.
Tumira kunze blog pane yako webhusaiti inogona kuve iri zano rakanakisa yekusimbisa zvisungo uye kuvaka inoshanda kwazvo uye yakagadzikana nharaunda yevashandisi.
Wedzera a tsamba dzemameseji icho chimwe chezvakanakisa zviridzwa kusimudzira zvemagetsi zvekutengeserana. Nekuti inogona kukwezva huwandu hukuru hwevangangove vatengi.
Ndekupi kwaunogona kutanga nharaunda yevashandisi?
Panguva ino inguva yekutsvaga kubva kwaunogona kuendesa idzi nzira dzekutaurirana munharaunda. Zvakanaka, vanogona kushandira zvese kubva mukati nekunze mapuratifomu. Ndokunge, iwe unogona kuvandudza ivo kubva kune yako nyanzvi chiitiko kuitira kuti zvaunoda zvigutsikane zvirinani. Nepo pane zvinopesana, mimwe migero yemunhu inogoneswa, senge iwo atinongedzera pazasi:
pasocial network: nechipo chakakura paunogona kusarudza izvo zvinonyatsoenderana nezvinodiwa zvako chaizvo.
Zvishandiso zvekuve nemafaira ako pane network uye nenzira iyi unogona kuvhura kubva chero kwaunenge uri uye mune ese mamiriro. Semuenzaniso, Google Drive kana Dropbox, pakati pezvimwe zvakakosha.
Zvimwe zviridzwa uko iwe uri muchinzvimbo chekuronga ako ezvinyorwa kana zvimwe zvinhu mune ruzivo. Vanogona kuita kuti iwe ukure zvishoma nezvishoma kuburikidza nekuvimbika kukuru nemutengi kana mushandisi kubva ikozvino zvichienda mberi.
Zvese izvi zvinotsigira zvinogona kubatsira kwazvo kuzadzisa chinangwa chako chaunoda uye izvo hazvisi zvimwe kunze kwekugadzira nharaunda yakatenderedza eCommerce kana zvemagetsi zvekutengeserana. Kubva pane ino mamiriro, zviri nyore kwazvo kuti kubva ikozvino uchiedza kutsvaga maturusi anonyatsodzivirira zvido zvekambani yako kana chiitiko cheadhijitari. Chokwadi iwe unowana chimwe chimbo chinosangana nezvinangwa izvi. Iwe unongo fanirwa kukudziridza zvine mutsindo uye pamusoro pezvose uchida kuenda kure zvakanyanya mune aya hunyanzvi.
Nzira yekugadzira sei network yevanoshandisa kana vatengi?
Mupfungwa iyi, hapana zvirinani kupfuura akateedzana matipi akareruka ekugadzira nharaunda yevashandisi kana vatengi inoshanda chaizvo uye inoshanda. Kufamba uchibva pamhando dzepamusoro dzepamusoro dzinooneswa nematunhu mazhinji mazuva ano. Iwe unongo fanirwa kuisa mukuita imwe yemitsetse yezviito iyo yatinopa pazasi:
Kana iwe uchinyatsokwanisa kugadzira nharaunda ine zvakajairika zvakakomberedza chigadzirwa chako, ziva uine chokwadi chekuti iwe uchave nechokwadi chikuru chikamu chebudiriro yekambani yako yedhijitari. Uchave uine nyore kwazvo kusvika kune vanogamuchira uye kuti ivo vanoziva zvigadzirwa zvako kana masevhisi.
Kuti ugadzire inodiwa nharaunda yevashandisi, zvichave zvakakosha kuti iwe uedze kupa iro rimwe bato rimwe basa. Asi uine diki diki iwe yaunofanirwa kufunga nezvayo kubva pane izvi: haisi chimwe chinhu pane kutsvaga kuswedera pakubata nemutengi wako. Uye ndeipi nzira iri nani pane kudzidza kubva kune avo maonero nezano. Ichi chinhu icho mhando idzi dzemagariro kana dzehunyanzvi nharaunda dzinogona kukupa iwe.
Chimwe chezvinangwa zvakakosha muhukama hweaya akasarudzika matunhu ichave yekukudziridza kuvimbika kukuru kune rimwe bato. Uye imwe yeakanakisa uye anonyanya kushambadzira marongero akavakirwa mukugadzira maturusi ayo anoshanda kusimbisa hukama muhukama. Ehezve, chichava chiyero chinoshanda kwazvo chawanga usina kusvika ikozvino.
Kana iwe haugone kupotsa chinhu chakapusa, asi panguva imwechete zvichidikanwa, sekusimudzira zvemhando yepamusoro zvemukati kubva pawebhusaiti yako zvinonyanya kufarira vatengi kana vashandisi. Hakuzovi neimwe nzira irinani yekuvandudza nharaunda yehunhu uhwu uine zvivimbiso zvebudiriro. Kana iwe ukazviisa mukuita munguva pfupi iwe uchaona kuti mhedzisiro yekutanga mhedzisiro inobuda sei nekushandisa kwayo.
Pasina mamiriro ezvinhu iwe unofanirwa kumanikidza vatengi vako, kwete kunyange kutengesa zvigadzirwa zvavo, masevhisi kana chinhu. Hwaro hwehukama hwakanakisa hwarara mune hunhu hwahwo, pasina chero nguva paine kumanikidzwa kwemhando ipi neipi inogona kuve nemhedzisiro isingadiwe.
Uye pakupedzisira, haugone kukanganwa kuti zvichave zvakakosha kuti iwe utumire kuvimba kune vese vanhu vari chikamu cheiyi nzira yekutaurirana. Kuti izvi zvive zvakadaro, iwe unofanirwa kupa hunyanzvi hukuru mumitambo yako, asi pamusoro pezvose kuzvibata kunge nyanzvi mune zvemadhijitari.
Nechokwadi chese, kana iwe ukatevera chikamu chakanaka cheaya mazano, iwe unenge uine zvishoma zviri nyore kusvika kune icho chinangwa chinotsanangurwa muchinyorwa chino. Ehezve, iwe unenge usina icho chakavimbiswa, asi pasina kupokana kuti iwe uchave wakafambira mberi zvakanyanya mune iri rakakosha basa rakatarisana newe panguva ino. Kunyangwe uchigara uchifunga nezve chikamu chemagetsi ako emagetsi ayo iwe unomiririra uye zvakare chimiro chevashandisi kana vatengi. Saka kuti nenzira iyi, iwe uri mune iri nani mamiriro ekufambira mberi mune rako reunyanzvi chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Marketing » evanhu vezvenhau » Mazano ekugadzira nharaunda yakatenderedza eCommerce
Makiyi ekugadzira yakanakisa imba SEO yeeCommerce yako